Nagu saabsan - Baron (Shiinaha) Co., Ltd.
Baron (China) Co., Ltd. waxaa lagu aasaasay maalgashiga Baron Group International Holding Co., Ltd.. Waxaa taageera laba nooc oo waaweyn oo caalami ah, Besuper iyo Baron, waa cilmi baaris iyo horumarin, nashqadeyn, soo saar, iibin, adeeg ka mid ah shirkadaha waaweyn ee sahayda dhallaanka ku takhasusay.
Noocyo Iskeed u Leedahay
Marka laga reebo ganacsiga OEM, sannadkan shirkadeena, oo ku saleysan khibradaha sannadka ee kooxda iyo wacyigelinta suuqa, waxay si firfircoon u bilaabeen dhowr magac oo madax-bannaan si ay u siiyaan macaamiisha alaab tayo sare leh oo aan qaali ahayn, oo ay ku jiraan Besuper Fantastic T Diapers, Pandas Eco Disposable Xafaayadaha, Xafaayadaha dhasha cusub, iwm, kuwaas oo ay si qoto dheer u jecel yihiin macaamiisha.
Samee & Soo-saar alaabooyinka ODM
Waxaan u horumarineynaa alaabada ODM ee dukaamada waaweyn, dukaamada silsiladaha daryeelka shaqsiyadeed iyo ganacsiyada kale adoo dhageysanaya, u fiirsanaya kana fakaraya baahida macaamiisha. Noocyo badan oo kala duwan, sida xafaayadaha carruurta, masaxa qoyan, xafaayadaha qaangaarka ah, boorsooyinka qashinka ee deegaanka u roon, maqaar-gacmeedka haweenka iyo waxyaabaha kale ee daryeelka shakhsi ahaaneed si loo daboolo baahida macaamiisha
Wakiilka alaabooyinka sumadda leh
Muddo sanado ah, shirkaddayadu waxay si adag uga shaqaysay sidii ay u abuuri lahayd xiriir iskaashi muddo-dheer ah shirkadaha wax soo saarka nadaafadda adduunka oo dhan. Waxaan bixinaa alaabada daryeelka ilmaha, alaabada daryeelka dadka waaweyn, alaabada daryeelka haweenka, iwm, waxaanna la kulannaa dalabaadka noocyada macaamiisha kala duwan.
Kooxda Hogaaminta Hufan
Kooxda hogaaminta xirfadeed waxay ku hogaamisaa shirkadda qaab ganacsi casri ah. Fikirka hal-abuurnimada ah ayaa noo horseeday inaan ku riixno wax soo saarkeena Koonfur-bari Aasiya, Afrika, Australia, Mareykanka iyo adduunka oo dhan.
Kooxda Iibka Xirfadlayaasha
Iyadoo sannado badan oo waayo-aragnimo suuq-geyn ah, aqoon wax soo saar hodan ah, geesinimo iyo fikir hal-abuur leh, kooxdayada iibka ee macaamiisha kala duwan si ay u bixiyaan alaabada tayada ugu fiican iyo adeegga ugu dhow.
Sababtoo ah isku dheelitirka silsiladda sahayda, iibsashada meel dhexe ayaa noo keentay faa'iidada qiimaha alaabta ceeriin; xakamaynta adag ee nidaamka wax soosaarka ayaa kordhisay heerka alaabooyinka la dhammeeyay waxayna yareeyeen qiimaha, sidaa darteed waxaan ku siin karnaa macaamiisha alaab tayo sare leh oo la awoodi karo.
Waxaan nahay alaab-qeybiyaha hagitaan oggolaansho leh ee shirkadaha xafaayadaha, bil kasta is-dhaafsiga joogtada ah ee qalabka la cusbooneysiiyay iyo teknolojiyada, hubinta soo-celinta badeecada ee jadwalka joogtada ah iyo tayada tayada wax soo saarka.
Xafaayad Dhal dhashay, Bamboo Xafaayada Xajmiga Xl, Masaxa Ilmaha Loogu Talo Galay Maqaarka Xasaasiga ah, Xafaayadda Eco Tayada Sare, Xafaayadda Ilmaha, Xafaayada la tuuro,
Xafaayadda Ilmaha, Xafaayadda Eco Tayada Sare, Bamboo Xafaayada Xajmiga Xl, Masaxa Ilmaha Loogu Talo Galay Maqaarka Xasaasiga ah, Xafaayad Dhal dhashay, Xafaayada la tuuro,